musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Super Hornet Fighter Jet Yakapunzika muCalifornia Desert
avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • ushanyi • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Fighter jet kuparara
Iyo nzvimbo: Death Valley National Park. Ndege: YeUS Navy F / A-18F Super Hornet murwi jeti. Chiitiko ichi: Yakapunzika mune yekumaodzanyemba chikamu chegwenga.
Iyo Navy yanga ichidzidzisa vatyairi muDeath Valley National Park kubvira ma1930.
Uku kupunzika kwendege yehondo kwakaitika kuma3 masikati muna Gumiguru uye yaive yeAir Test uye Evaluation Squadron (VX) 4.
Mhando imwechete yendege - iyo F / A-18F murwi wejeti - yakadonha muRufu Valley muna 2019 munzvimbo inonzi Star Wars Canyon.
Ino inguva yechipiri jeti yeUS Navy yendege ichirovera muRufu Valley National Park mumakore matatu apfuura. Kazhinji kurovedzwa kwemauto nendege hazvibvumirwe pamusoro pemapaki emunyika, zvisinei, chikamu ichi cheDeath Valley pakaitika tsaona dzichangobva kuitika chakasarudzwa senzvimbo yavo apo Congress yakawedzera nzvimbo kupaki makore 3 apfuura. Iyo Navy yanga ichidzidzisa vatyairi vepano kubva kuma27.
Kupunzika kwendege yendege kwakaitika kuma3 dzemusi waGumiguru 4 uye yaive yeAir Test and Evaluation Squadron (VX) 9. Sezvineiwo, mutyairi wendege akakwanisa kuburitsa ndokurapwa kukuvara kudiki kuchipatara cheLas Vegas uye yakaburitswa.
Muna 2019, iyo ndege imwe chete, iyo F / A-18F Super Nyanga, yakarovera muRainbow Canyon, inonziwo Star Wars Canyon, munzvimbo yekumadokero kwepaki inozivikanwa saBaba Crowly Vista Point. Nehurombo, kuparara uku kwakauraya Lt. Charles Z. Walker uye kwakonzera kukuvara kune vanoverengeka vakamira.
Iwo madziro e Star Wars Canyon akaumbwa ne metamorphosed Paleozoic limestone uye rimwe pyroclastic dombo. Iko kusanganiswa kwezvinhu zvematombo kwakagadzira madziro ereds, grey, uye pinki yakafanana neyekunyepedzera Star Wars nyika Tatooine, saka zita remadunhurirwa.
Ino inzvimbo inozivikanwa kune vanoona ndege kuti vatore mumajeti eU.S. vanoita ndege dzekudzidzira dzisingabhururuke pavanenge vachikwira nemumakoronga makamanikana eRufu Valley. Hapana vashanyi vepaki vakakuvara uko tsaona yakaitika padyo neNaval Air Weapons Station China Lake, iyo inopfuura paki yacho kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero.
Ndege dzehondo kumhanya nepakati pecanyon pa200 kusvika 300 mph uye kana ichibhururuka zvakadzika kunge mazana maviri emamita pamusoro penzvimbo yepasi, ivo vachiri vangori mazana emamita pazasi pevatariri pamupendero. Vanoona ndege vari padyo nendege zvekuti vanogona kuona kazhinji kumeso kwevatyairi, avo, vari kusungirwa kupa vamwe varatidziro nemasaini.